”Yaan warbaahinta qaranka laga reebin xawaaraha tiknolojiyadeed ee asaaggeed” – Sida ay muhim u tahay in WQ laga dhigo il wareed lagu hirto! | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Yaan warbaahinta qaranka laga reebin xawaaraha tiknolojiyadeed ee asaaggeed” – Sida ay...
”Yaan warbaahinta qaranka laga reebin xawaaraha tiknolojiyadeed ee asaaggeed” – Sida ay muhim u tahay in WQ laga dhigo il wareed lagu hirto!
(Hadalsame) 08 Maajo 2019 – Waxaan xusuustaa Allah ha u naxariistee Madaxweyne Siyaad oo shil galay in loo qaaday Isbitaal Sucuudiga ah.
Previous articleGOOGOOSKA: Liverpool vs Barcelona 4-0 (4-3) (Liverpool oo Barca ku soo noolaatay)
Next article”Koloriin caba si shaydaanku idiinkaga boxo!” – 27 dhimatay & 18 bestood ah kaddib markii uu JIK ka dherjiyay wadaad kasiinadeed + Sawirro